P3D leh "180_liveries_collection_pack_for_b737-800"
P3D leh "180_liveries_collection_pack_for_b737-800" 1 sano 8 bilood ka hor #1276
Labadoodaba waan haystaa FSX iyo P3D lagu rakibay PC-ga.
Waxaan isku dayay inaan rakibo xirmada "180_liveries_collection_pack_for_b737-800" gudaha P3D laakiin waxay leedahay waa horayba loo rakibay (maxaa yeelay waan ku jiraa FSX) oo u baahan in la furo.
Waxaan rabaa in aan haysto xirmadaas labadaba siman ee kombiyuutar isku mid ah. Maxaa samayn karaa?
P3D leh "180_liveries_collection_pack_for_b737-800" 1 sano 8 bilood ka hor #1277
Muxuu yahay nooca aad tahay P3D ? Haddii ay tahay nooca 4 si fudud u baar labadaba FSX iyo P3D v4.
Haddii kale, xulo rakibaadda caadada oo ku rakib faylka galka ka dibna wax walba koobi geli mashiinka duulista aad rabto. Iska jir faylasha loogu talagalay FSX way ka duwan yihiin feylasha loogu talagalay P3Dv4.